Impahla yokuncedisa indlu kunye nezandla zakho kwizinto eziphuculweyo. Izandla zokuthuthuzela ekhaya.
senza ikhefu ngezandla zethu
Umncedisi ngamnye kufuneka abe namaqhinga akhe adala "imilingo yasekhaya", ejika egumbini eliqhelekileyo ukusuka emagumbini amaninzi ukuya kwisihlamba eshushu kwaye esinobuhle, apho ufuna ukubuyela kwakhona. Wonke umntu unalo okanye wayenogogo osebenzise yonke into ayisebenzisayo - i-anyanisi yomisa kwiimboli zamandulo ze-kapron, ama-groats kunye nexesha lokutya kwiimbiza ezisetyenzisiweyo, izimbiza zeentyatyambo ezivela kwisitya esiqhekekileyo ... Imifanekiso eqhelekileyo? Isandla sezandla ngezindlu ngezandla zabo asikunceda nje ukugcina imali kwizinto ezizithengisayo eziphezulu, kodwa nokufumana izakhono ezifanelekileyo eziya kuba luncedo kwixesha elizayo.
Iikharityu "ICafe Cafe"
Amakhethini okukhanya "I-Sweet Cafe" ilungele ikhitshi elincinci. Baya kunceda ukudala umoya ococekileyo kwaye banike ikharityhulam ekhethekileyo kwindlu egqibeleleyo. Kwaye inkosikazi engumnandi uya kuba nokwenza amakhethini anjalo ngezandla zakhe.
intambo yokuthunga kwithethini yombumba
isepha yomsiki okanye esomileyo
Ukulinganisa inani elifunekayo lendwangu, ngokusekelwe kububanzi nokuphakama kwewindow. Kwinqanaba eliphumo, faka ama-5 cm ukusuka kumgca ongaphantsi kunye nesibonelelo esincinci somgca ophezulu (1-2 cm). Kwixesha elizayo lepalini yecandelo eliphezulu lamakhethini, umgca wengubo engama-23 cm ubukhulu kwaye ubulingana ubude kwindwangu evamile iyadingeka.
Iphaneli kunye nelayini kwinqanaba eliphezulu kufuneka linqunywe, i-trowel nganye inxalenye ebubanzi, ukuba kuyimfuneko. Yenza itemplate ephuma kwiphepha le-edge edge. Cindezela ukusuka kumda we-6 mm ukuya kwi-3 mm nganye kwongezwa kwicala elingalunganga kwinqununu elingaphezulu. Khusela isityu ngokuthunga izikhonkwane kunye nokugxotha.
Namathisela inxalenye ephezulu kwiphaneli ngobuso kwaye ulungelelanise imida engagciniweyo. Namathisela iphepheni kwiphepha, wenze i-indent 1 cm ukusuka kwimida kunye phezulu. Vala iphethini ngezikhonkwane zesiNgesi. Ikhokki okanye isiqwenga sesephu endala esomileyo malunga nomzekelo. Ungayigxininisi iphethini kwaye uyibeke eceleni.
Vala intsimbi kunye nezikhonkwane kwaye uhluthe iziqendu, uthungele ujikeleze emigqeni ephawulwe ngaphantsi kweeqhekeza ukuya ngaphantsi kwendwangu.
Gxuma kumigca ephawulweyo kwaye ususe inotshi. Yinqumle umgca, uhambe malunga ne-1 cm yesibonelelo kwisondlo sonke.
Yenza ukubonwa kwinqayi, ukugcina umgama ukuya kumsila awukho ngaphantsi kwama-3 mm. Sika iingqungquthela zezibonelelo kwiimigangatho ezivela phezulu kwinyosi nganye.
Ukucoca isiqwenga esiphezulu, ulungelelanise ngenyameko iikona uze ucinezele iimijelo eziphathwayo. Kulula kwaye ukhawuleze ukulungisa iikona ngokusebenzisa ingongoma yeesisi okanye ukudibanisa inaliti.
Cindezela imitha engama-6 mm ngaphantsi kwe-3 mm ukuxhaswa nganye, ukukhuseleka ngezikhonkwane uze uyigwebe. Yenza ngayo yonke imida ejikeleze umgama wepaneli.
Cinezela ngaphantsi kwe-2 cm yomgca ongaphantsi wekhefu elizayo 1 cm nganye yokongeza. Ukuthungatha ngesandla "ibhokhwe".
Ukukrazula ngaphantsi kwe-4 cm ukusuka phezulu kwezinyo ngalinye uze ubonise "ibhokhwe" ngomgca.
Gcoba iifowuni kwicala langaphambili lekhethini kwi-loop nganye ye-5 cm ukusuka phezulu. Ukuze ube nempembelelo engakumbi, ungadonsa amaqhosha amakhulu akhangeleka kude ukusuka kude.
Iingcebiso eziwusizo: ukwenza ikhethini elungileyo kunye ngaphakathi, nangaphandle, fakela umbane kuyo, ngaphandle kokuthunga ukuya ngasezantsi kwepaneli. Emva koko ikhefu liza kubonakala lilungile kwaye isandla sakho siza kubonakala nakwizitalato.
Iingcweti ezithandekayo: indlela yokwenza iimathoyilo zonyaka omtsha zoluvo ngezandla zabo
Iimakhadi zokuzalwa ezihle ngezandla zakho
Indlela yokukhetha inkqubo yokutya eyiyo?
Iinkwenkwezi zaseRashiya zabonisa imifanekiso yemithi yabo yeKrismesi
Indlela yokusabela ngokuchanekileyo kwincwadi yokutshutshisa kwiindawo zokunxibelelana
Umsila wevini kunye noshicikile
Yidla ngokuchanekileyo: imithetho emihlanu yokugonywa okunempilo
Indlela yokuqokelela kwinqanaba?
Iimpawu zentliziyo yabantu kunye nevumba
Amalungu aphilileyo - amadolo anamandla
Ngaba umntu ufuna ukholo kuThixo?
UDaria Pynzar waziqhayisa ngesambatho esinobuqhophololo, umfanekiso